Pasုံ pastry: အဆိုပါ Dutchtown စီးပွားရေးအရောင်းပြခန်း• DT2 • Downtown Dutchtown
The Dutchtown Business Showcase: စုံလင်သော Pastry
အပေါ် Posted ဇန်နဝါရီလ 27th, 2021
အဆိုပါ Dutchtown စီးပွားရေး Showcase ပြန်လည်ရောက်ရှိ! ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုစီးရီးသည် Dutchtown တစ်လျှောက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့နှင့်၎င်းတို့ကိုလည်ပတ်စေသည့်သူများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ pastry စားဖိုမှူး Chris Phillips ကိုလည်ပတ်ခဲ့တယ် Pasုံ pastry။ fectုံ pastry မှာတည်ရှိသည် မြို့ပြအိမ်နီးချင်းစားနပ်ရိက္ခာခန်းမစားသည် Downtown Dutchtown ၌တည်၏။
2019 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Perfectly Pastry သည်နံနက်စာစားစရာ pastries များ၊ muffins များ၊ သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းအတော်များများ keto ဖော်ရွေသို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၂၀ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသူတို့၏ Dutchtown လက်လီအရောင်းနေရာတွင်ရရှိနိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုများအပြင်သူတို့သည်လည်းပြုလုပ်ကြသည် လက္ကားမုန့်ဖုတ် စိန့်လူးဝစ္စဒေသတစ်လျှောက်ရှိကော်ဖီဆိုင်များနှင့်အခြားဖောက်သည်များစွာအတွက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလက်ကားစစ်ဆင်ရေးများထဲကကုန်ဆုံး Urban Eats တွင်စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်ကိုမျှဝေသည်.
ထို့အပြင်စားဖိုမှူးခရစ်နှင့်သူမ၏သမီးများ / စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကမ်းလှမ်းသည် နည်းပြများနှင့်အရင်းအမြစ်များ အခြားသူများကသူတို့ရဲ့မုန့်ဖုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ကူညီရန်။ သူတို့သည်မုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းရည်များကိုသင်ကြားရန်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သောတရားမျှတမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည် ဂါးဒီးယန်းအိန်ဂျယ် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်နှင့်အခြားအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော။
Pasုံ pastry သည်မှာ 3301 Meramec လမ်းမှာတည်ရှိသည် မြို့ပြအိမ်နီးချင်းစားနပ်ရိက္ခာခန်းမစားသည် Downtown Dutchtown ၌တည်၏။ အဆိုပါအာကာသကိုလည်းနေအိမ်ဖြစ်ပါတယ် Juanita's Creole Soul Café နှင့် Tacos, La Jefaသူတို့ရဲ့ Shared Kitchen မိတ်ဖက်အချို့နှင့်အတူပေါ်လာသည့်အစားအစာပွဲများလည်းပါဝင်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့နှင့်သောကြာနေ့များကိုနံနက် ၇း၃၀ မှ ၂ နာရီအထိ၊ စနေနေ့၊ သင်တို့သည်လည်းစုံလင်သောမုန့်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Facebook က, တွစ်တာနှင့် Instagram ကို.
ကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်ခဲ့သည့် Dutchtown Business Showcase ၏ယခင်ဖြစ်ရပ်များတွင် Logan's Kids Resale မှ Cassandra Logan နှင့် Juanita's Creole Soul Caféတွင်စားဖိုမှူး Curtis McCann။ ဤနှင့်အခြားဗွီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်တွင်လည်းရှာနိုင်သည် DutchtownSTL ယူကျု့ချန်နယ် (ကြိုက်တယ်နှင့် subscribe!) ။
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ Chip Smith မှထုတ်လုပ်ခြင်း Grand Cross.
အောက်မှာ Filed ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ်, Dutchtown စီးပွားရေး Showcaseနှင့် Dutchtown CID. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ.
DT2 • Downtown Dutchtown ဒိန်းမတ် The Dutchtown Business Showcase: စုံလင်သော Pastry